24.2.2013 နေ့အထိထုတ်ရှိသော Huawei Firmware များ : Myanmar Mobile Software Developer
February 24, 2013 | 93 Replies
24.2.2012 နေ့အထိထွက်ခဲ့တဲ့ Firmware တွေကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်…
C8812 ကတော့ Kernal 50 ထွက်လာတာအသစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်..
C8813,Android 4.1,Emotion UI,V100R001C92B167
(U8951)G510-0010,Android 4.1,Emotion UI,V100R001C17B173
(U8833)Y300-0000，Android 4.1,Emotion UI,V100R001C17B172
(T8833C)Y300-2010，Android 4.1,Emotion UI,V100R001C92B166
TG says: February 24, 2013 at 2:02 pm ကျေးဇူးကမ္ဘာပါဗျာ
Reply Thet Lwin Oo says: February 26, 2013 at 7:00 am အကိုရေ ကျွန်တော် huawei y210T က B839 ပါ wifile error ပြနေလို့ဘယ်လိုရှင်ရမလဲတစ်ချက်လောက်ကူညီပါ
Reply ဖြိုးချမ်း(Admin At MMSD) says: February 26, 2013 at 9:03 am ကျွှန်တော်ရေးထားတဲ့ Tool လေးနဲ့စမ်းလိုက်ပါ။
Replyှဘိုစံကွိ says: November 28, 2013 at 7:30 pm အဲဒါနဲ့ လုပ်ပြီး တာတောင် မရတော့ ဖုန်းတွေ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်များလာပါတယ် . အဲဒီကိစ္စလေး ရယ် . C 8813 မှာ Wifi ပျက်ရင် frimware ရေးလိုက်ပါတယ် Zapya သုံးတာနဲ့ ပျက်တာပဲ .. အဲဒါလေးပါ ရှင်းပေးပါဦးဗျာ
Reply htet oo lwin says: May 28, 2013 at 4:26 pm အကိုအင်တာနက်ချိတ်ပြီး about phone ကနေ update မြှင့်လိုက်ပါအဆင်ပြေတယ်
Reply aung aung says: February 27, 2013 at 1:45 am Brother ကျွန်တော်huawei y220 rootလုပ်တာcamera ပြောင်းပြန်ပေါ်တယ်
Reply koko says: August 1, 2013 at 3:24 pm firmware ပြန်တင်ပါ
Reply yenaung says: March 1, 2013 at 11:01 am အကြိုက်ဆုံးပဲဂျာ
Reply khanksoemoe says: March 6, 2013 at 1:35 pm ကျေးဇူးပါ
Reply နေဇော်အောင် says: March 8, 2013 at 10:53 am ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်…
Reply sid says: March 8, 2013 at 3:45 pm u 8661 လေးလိုချင်တယ်အကိုရေ…….ဘယ်မှာမှရှာမတော.ဘူး
Reply Aung Phyo says: March 12, 2013 at 8:43 am အကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply Aung Phyo says: March 12, 2013 at 11:00 am အကို u8661 ကို firmeare အကုန်တင်ပေးပါဦး
Reply Aung Phyo says: March 12, 2013 at 11:02 am အကို u8661 ကို firmware အကုန်တင်ပေးပါဦး
Reply PhoeThar says: March 23, 2014 at 9:19 pm http://www.mediafire.com/download/5gc528g8w7had53/%2B%C2%AC%2B%C2%ACSONIC%2B%C2%A6%C2%A6%2B%C2%A6%C3%BA%C2%BFU8661%2CAndroid+2.3%2C%2CV100R001C17B832%2C%2B-%C2%A6%C2%B7-%C2%AC-%C2%BF%2C05010VVE%C3%BA%C2%AC.zip
Reply chitthulover2013 says: March 13, 2013 at 5:34 am အကိုရေsamsung galaxy next mini firmware လိုချင်လို့ပါ
Reply PhoeThar says: March 23, 2014 at 9:23 pm This is fully guided Link which will help you from beginning to the end
Reply Nay Myo says: March 14, 2013 at 3:24 am c8650 အတွက် official firmware လေးရှိရင် ကူညီပါအုံးဗျာ…..
Reply PhoeThar says: March 23, 2014 at 9:20 pm This is what you would like to download !!! Enjoy !!!
Reply minnkhine says: March 14, 2013 at 10:23 amိကိုဖြိုးချမ်းရေ G510 Build Number173 အတွက် Root နည်းလေးရှိရင် တင်ပေးပါလားခင်ဗျာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Reply chitthulover2013 says: March 15, 2013 at 5:52 am အကို ရေညီ့ကိုကူညီပါဦး
Reply chitthulover2013 says: March 15, 2013 at 5:55 am ညီ NEXT MINI က2.3.4 ပဲရှိလို့ပါ ကူညီပါဦး
Reply Ko Zaw says: March 31, 2013 at 10:32 am ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော်ကို U8815 Firmware လေ ရှိရင် ကျွန်တော်ယူချင်လို့ပါ
Reply backspaceman937 says: March 31, 2013 at 10:36 am U 8815 Firmware လေ ရှိရင် တင်ပေးပါနော်
Reply soethutun says: April 5, 2013 at 8:33 am အစ်ကိုရေ firmware ပြန်တင်ရင် firmware ဘယ်ဗားရှင်းတင်ရမလဲဆိုတာကို ဘယ်နေရာက နေကြည့်ရမှာလဲ အစ်ကို။ နားမလည်လို့ပါ။
Reply chitthulover2013 says: April 5, 2013 at 10:14 amွှအကိုရေညီ့ကိုကူညီပါအုံး။ U8510-1 firmware လေးပေးပါအုံး
Reply ko zaw says: April 6, 2013 at 9:02 amွှT8828 က Root Software မထွက်တော့ဘူးလား မြန်မာလို ဘယ်လိုသုံးရမလဲ ပြောပြပေးပါလား ၀ယ်ပြီးတော့ စိတ်ညစ်နေရလို့ ကူညီပါအုန်း
Reply cometnmt says: June 7, 2013 at 1:22 pm For One of the God Phone T 8828 ဆိုပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လခွဲလောက်က တင်ပေးခဲ့တာတော့ တွေ့မိတယ်ဗျ။
Reply ဗိုလ်ချို says: October 23, 2013 at 4:57 pm t8828 custom firmware လိုချင်ပါတယ် ရှိရင်ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်
Reply Nyithwin says: April 23, 2013 at 12:29 am အစ်ကိုတို့ရေ U8500 ကို firmware မြှင့်ချင်တာ လက်ရှိ က 2.1 ပါ gingerbread ရတယ်ပြောလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ညွှန်ပေးပါအုံးခင်ဗျာ
Reply Kaungmon says: April 24, 2013 at 8:11 pm Huawei Y210C 826 ROOTလေးရှိရင်တင်ပေးပါဦး
Reply tkyikhant says: April 24, 2013 at 9:03 pm thankyou
Reply zaw says: April 30, 2013 at 12:16 pm ကျွန်တော်မှာ huawei u8815 ပါ c8812 firmware မှားတင်မိလို့ GSM သုံးလို့မတော့ဘူး ဘယ်လို့လုပ်ရမှာလည်း ပြောပေးပါအုံး u8815 frimware ပြန်တင်ရမှားလား ဘာမှမလုပ်တတ်လို့ပါ
Reply Ao says: May 7, 2013 at 12:42 am အစ်ကို ကျွန်တော့်ဖုန်းက Huawei Y210C Custom Firmware လေးလို့ချင်လို့ပါ…. ကူညီပါအုံး
Reply ကိုရဲ says: May 10, 2013 at 5:47 pm G510 T8951 fireware ကိုdown တာ unlock file ဆိုပြီး password တောင်းနေလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Reply Hein Htet says: May 24, 2013 at 2:30 pm ခု 1500 တွေအတွက် MEC ကချပေးတဲ့ ZTE N880E CDMA 800 Handset ကိုမြန်မာ fonts ထည့်ချင်တာ Roots ဖောက်နည်းနဲ့ Fonts ထည့်နည်းရှင်းပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာ
Reply [email protected] says: May 25, 2013 at 5:19 pm အကိုရေ huawei P1 firmware ဖိုင်လေး တင်ပေးပါလား B 003 ပါ
Reply proseng says: May 27, 2013 at 6:37 pm အကိုရေG-500-0000 root လေးတင်ပေးပါလား
Reply proseng says: May 27, 2013 at 6:43 pm အကိုမှားသွားလို့နော် G520-0000root လေးတင်ပေးပါလား.
Reply အောင်ဗလ says: May 28, 2013 at 2:56 pm ZTE N880 E အတွက်မြန်မာ font လေးကူညီပါဦး
ကွန်ပျူတာနဲ့ အင်တာနက်ချိတ်သုံးတာလည်း မရဘူးဗျ
Reply Ye lin Htet says: June 8, 2013 at 3:02 am အစ်ကိုရေ ZTE N880E က VR ဆိုတဲ့ Root tool နဲ့ အဆင်ပြေပါတယ် ပြီးတော့ Zawgyi Changer သွင်းလိုက် KeyBoard က တော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ KeyBoard နဲ့သုံးပါ အဆင်ပြေပါတယ်…
Reply athens says: June 3, 2013 at 12:56 am Y210c b826 firmware လေး ကူညီပါဦး အကိုတို့ ရေ phone power on လိုက်ရင် the application china telecomepush [ process android.process.acore] is unexpectively stop. ဆိုပြီးပြနေလို့ 
Reply willian says: June 4, 2013 at 10:38 pm huawei C8812 b950 က reset ကျကျ နေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပြပေးပါ…firmware ပြန်တင်နည်းလေးရှိရင်လည်း ကူညီပါအုံး
Reply cometnmt says: June 7, 2013 at 1:17 pm အကိုရေ
U 8800-51 (Impulse 4g) at&t USA Version အတွက် firmware လေးရှိရင် ကူညီပေးပါဦးဗျာ။
Reply Ye lin Htet says: June 8, 2013 at 3:00 am အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်ရဲ့ ZTE N880e လေးရဲ့ Firmware ကျ သွားလို့ Down လို့ရမယ့်ဆိုဒ်လေးရှိရင် ကူညီပေးပါအုန်း မူရင်းက Android 4.0.4 ပါ
Reply Lyance says: July 11, 2013 at 2:27 pm http://www.ztedevices.com/support/smart_phone/27239545-f07b-4d02-918c-b0cbcdcdabc5.html
Me downloading this… but.. not sure it is correct .. ရမရတော့မသိဘူး…
Reply yelinkoko says: June 9, 2013 at 2:44 pm Samsung GT S5830 ကို firmware လေး လုပ်ပေးပါအုံးအကို
Reply daavesai says: June 23, 2013 at 1:54 pm HAUWEI Y220 T ကို wcdma mode ဘယ် လိုပြောင်းလို့ရလဲ သိချင်ပါတယ်..
Reply komaung says: June 28, 2013 at 10:17 pm အစ်ကိုရေ T 8828 ရဲ့ Root Softwear လေးကိုတင်ပေးပါအုံးနော် Think!
Reply komaung says: June 28, 2013 at 10:22 pm အစ်ကိုရေ တရုတ်ဖုန်း Model-ISA-JADE (ET A16) ရဲ့ Firmware လေးကိုရှိရင်တင်ပေးပါဦးနော် …..
Reply Zayan says: June 29, 2013 at 3:25 pm လုပ်ကြပါဦးဗျာ 210-2010 build no;V100R001C92B828 firmware ဒေါင်းသွားလို့ပါ၊
Reply phyolay says: July 7, 2013 at 5:58 am G610-U00 firmware
Reply yarzarhtun says: July 8, 2013 at 12:53 pm အကိုရေကျွန်တော့်ရဲ့c8813ကsoftwareupdateလုပ်လိုက်တာsimကဒ်မသိတော့ဘုးကျန်တာအကုန်ရတယ်
Reply nyi nyi says: August 14, 2013 at 11:28 pm restart lg
Reply ko phyo says: July 11, 2013 at 1:10 pm ကို G610-u00 Keyboardုရိုက်ရတာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ် ကူညီပါဦး
Reply Lyance says: July 11, 2013 at 2:02 pm ZTE N880E firmware ၇ှာမတွေ့လို့ တင်ပေးပါohm!!
Reply laythargonetharr says: July 13, 2013 at 6:33 pm အကို ကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းတွေကို firmware , software ,hardware တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ် ဒါပေမဲ့သင်တန်းကိုမတက်နိုင်ဘူး ပိုက်ဆံကမတတ်နိုင်ဘူးလေ အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်သိ့ချင်တာလေးတွေကိုမေးလို့ရလား
Reply laythargonetharr says: July 13, 2013 at 6:35 pm ကျွန်တော် အကို့ကိုဆရာတင်ပါတယ်အကို
Reply A shinkavinda says: July 22, 2013 at 7:19 pm U8860 ရဲ့ ဗားရှင်း အမြင့်ဆုံးနဲ့ ဖမ်းဝဲလ်ယား လေးရချင်လို့ပါ
Reply nyinyi says: July 24, 2013 at 8:54 pm မင်္ဂလာပါ
Reply konaw says: August 8, 2013 at 3:15 pm Huawei Y220-T10 အတွက် firmware လေး ရှာပေးပါလားအကို
pac ဖိုင်ရမ်းလိုက်တာ အသစ်ကို touch မရတော့လို့ပါ hardware ကတော့ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်လိုအဆင်ပြေနိုင်မလဲ ဖြေပေးပါ။
Reply kaung kywe says: August 12, 2013 at 10:58 am Dear Bro , U8836 နဲ့ U8950 ကို Jelly Bean ထိမြင့်လို့ရပါသလားခင်ဗျာ
ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ရတယ်ဆိုရင် ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ
Reply Atomic says: August 18, 2013 at 1:59 pm Huawei C8813 ရဲ့ official firmware့ နောက် ဆုံး ထွက် Build Number လေးရှိရင်
Share ပေးပါ အကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply kyin thein says: August 30, 2013 at 11:00 am သိချင်တာရှိရင် ၀င်ဝင်ရှာလို့ရတဲ့ရလို့ ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ် အားလည်းကိုးပါတယ် …..
Reply linlin says: September 4, 2013 at 11:09 am အကိုရေ8813Dက firmwareတင်ရင်အဆင့်၂မှာerrorတက်နေတယ် errorရှင်းနည်းလေးပြောပြပါအုံး
Reply waiphyo says: September 9, 2013 at 12:09 pm Please,give me huawei g700u00
Reply oceanmaster says: September 12, 2013 at 6:09 pm huawei g610c00 root လုပ်နည်း ပြောပြပါဦး
Reply saingmoon says: September 13, 2013 at 10:20 am zte n960 fireware လေးတင်ပေးပါခဗျာ
Reply saikyawzinmyint says: September 13, 2013 at 9:30 pm u9200 recoverymode ၀င်မ၇လိုဘယ်လိုလုပ်၇မလဲ
Reply lwinlinnkhant says: September 14, 2013 at 6:18 pm အခုလိုဖြန်.ဝေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply lwinlinnkhant says: September 14, 2013 at 6:21 pm galaxyS4 network lockဘယ်လိုဖြေရမလဲခင်ဗျာကူညီပါဦးဗျာ
Reply minmin says: September 15, 2013 at 12:48 pm အကိုရော huawei U 9500 -1V100R001CHNC00B126 Firwame လိုချင်လို့တင်ပေးပါလားဗျာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
Reply hanchan says: September 15, 2013 at 9:34 pm အကိုရေ U8815 B953 firmware လေးရှိရင်တင်ပေးပါလားအကို ကျေှးဇူးတင်ပါတယ်
Reply tinmoeaung says: September 25, 2013 at 9:43 am ဆရာချမ်း U8825D B953 offical firmware ရှိရင် တင်ပေးပါခင်ဗျာ..
Reply tinmoeaung says: September 25, 2013 at 9:52 am ဆရာချမ်း U8825D B953 offical firmware ရှိရင် တင်ပေးပါဦးခင်ဗျာ..
Reply baby waiyan says: October 15, 2013 at 10:09 am 210-2010 build no;V100R001C92B825 ကို 210-2010 build no;V100R001C92B824 တင်လို.ရလားဘာဖြစ်နိုင်လဲပြောပေးပါလား. 210-2010 build no;V100R001C92B825 ကရှာတာမတွေ.လို.ပါ
Reply Naing Naing Aung says: October 16, 2013 at 4:02 pm အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်ဖုန်း Huawei U8813D က firmware တင်လို့မရလို့ firmware တင်ရင် EMMC is readonly. You can’t update system လို့ရေးထားတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို လမ်းပြပါအုံး
Reply yabainthar says: October 21, 2013 at 11:22 am့့ကိုကြီး huawei 8825D sdcard ကဘာမှ မထဲ ပဲနဲ့ ပြည့့် ပြည့်နေတာဘာလုပ်ရမလဲ
Reply Dr.Phone says: October 31, 2013 at 11:43 am Y210-2010 B828 firmware လိုချင်ပါသည် လင့်ရှိလျင် ညွန်ပြပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
Reply thein zaw says: December 1, 2013 at 2:22 pm samsung i619 ကို Morelocale .apk udk run လိုက်တာ power ကျလိုက်တက်လိုက် ဖြစ်နေတယ် ကူညီပါအုံး
Reply aungko says: December 6, 2013 at 2:51 am Y320-U01 V100R001C17B500 Firmware လေးရှိရင်လိုချင်တယ်ဗျာ တစ်ချက်လောက်ကူညီပါဦး
Reply ae says: December 11, 2013 at 3:03 pm asd
Reply ae says: December 11, 2013 at 3:05 pm kal par brother g520 firmware step2fail kal par
Reply သော်ဇင်လင်း says: December 15, 2013 at 3:55 pm အကို ကျွန်တော့်ကို C8655 official Firmware လေးရှိရင်တင်ပေးပါဦး
Reply AZA says: December 18, 2013 at 9:51 am Y210C Y210 2010 Firmware B825 လေးတင်ပေးပါလားရှာမတွေ့ လို့ ပါဂျာ
Reply zin myo says: December 25, 2013 at 1:27 am အကို ကျွန်တော်c8813 ကိုfirmware တင်တာ start2မှာ မရဘူးအကို လုပ်ပါအုံး ကူညီပါ အရမ်းခက်နေလို့ပါ
Reply Yeyanpaingtoe says: December 30, 2013 at 10:49 am အစ်ကိုရေ Huawei Y -320C00 Firmware လေးတင်ပေးပါဦး
Reply zwekhantzin says: January 1, 2014 at 3:06 pm Zzzwee ziinn
Reply zayzay says: February 20, 2014 at 9:03 am ကျွန်တော်y 210 2010(2010v100R001C92B828)ကမြန်းဒရွိုက်တူးလ်းကိုသုံးပြီးကြောင်သွားပါတယ်တခါတခါဟန်းသွားပါတယ်ရီစတက်ချလဲမရလို့ဘယလိုလုပ်ရမလဲပြောပြပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply phoekhwar says: April 17, 2014 at 11:31 pm download လုပ်မ၇လို့ကူညီပါအုန်း
Reply san aung htet says: May 26, 2014 at 2:54 pm အကိုရေ
Huawei Ascend Y600-U20 firmware လိုချင်လို့ပါ
Reply minthantnaing says: May 27, 2014 at 1:17 pm အကို​ရေ huawei G 610s အတွက်​ custom rom ​လေးရှာ​ပေးစမ်းပါခင်​ဗျ
Reply Kyaw Min Oo says: June 2, 2014 at 4:07 pm Y320-C00 ကို network unlock file လေး run လိုက်တာ restart ကျပြီး huawei logo တောင်ပြန်မတက်တော့လို့။
power ဖွင့်လိုက်ရင် vibrate ပဲတုန်နေတယ်။
Views (767) | Comments (23)
Views (578) | Comments (1073)
Views (576) | Comments (7)
Views (31864) သိသင့်သောဗဟုသုတများ…..
Views (28752) Huawei ဖုန်း 12 လုံးအတွက် firmware တင်ရင် updtae failed ဖြစ်...
Views (27545) MM Sexy Girl (Myanmar Model များ အလှဓာတ်ပုံစုစည်းမူ)
Views (25856) C8813D,Y300C Auto Root & Zawgyi keyboard
Views (18474) Myandroid v1.4 (Myanmar Android Service Tool)
Views (17380) C8816,C8816D Unlock Bootloader,Auto Root,Auto Myanmar Font (...
Views (15627) Like Us On Facebook! Myanmar Calendar